Daawo:- Beelaha dega gobollada Awdal iyo Salal oo qarka usaaran inay ka go’aan Somaliland. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDaawo:- Beelaha dega gobollada Awdal iyo Salal oo qarka usaaran inay ka go’aan Somaliland.
September 7, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Somaliland, Soomaliya, Wararka maanta 7
Kulan aaya katashi ah oo ay isugu yimaadeen cuqaasha beelaha godabiirsi ee Somaliland ayay si adag u saluugeen siyaasadda xukuumadda Hargaysa.
Cuqaasha kulanka kahadlay ayaa si adag uweeraray siyaasadda Muuse Biixi uu ku wajahayo beelaha dega gobollada Awdal iyo Salal.
Waxay ku hanjabeen in labadaad gobol aysan ka dhici doono wax doorasho isla markaana beelaha goboladaasi ay soo saareen bayaan ay digniin arintaasi ah ugu dirayaan xukuumadda Somaliland.
Marqaanews waan idin salamay.
Wali maydan kadaalin somaliland baa birburaysa,kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Geed aanad goyn karin wa ladhunkada
@ Zaaji Saalax
Magac somaliland waxa ula baxay BRITISHKI gobolada waqooyiga Gumeysan jirey, maxaad uga dhigaysa dawlad weligeed jirtay.
Somaliland waa Maamul Goboleed ka tirsan somaliya, waxaan intaas ahayn meesha ma yaalo.
Beesha dhexe waxay doonto ha ku Riyooto laakin ma dhacayso in somaliya aad ka Go’daan, muuse biixi waxa loogu sheegay djibouti isago cadhaysanna wuu soo noqday.
iidor horta jabhadda ku furan ee dhexdooda ah Xal ha u helo.
Hartiga Bari iyaga warkkoda meesha kaba saar, Samaroon iyo Ciisena wey kacsan yihiin.
Xaqiiqda Dagaalka Jabhadda Colonel Caare.
Adiga cuqdad iidoor ayaa kudilaysa,dawo malihid zxb.
Maalinti oo dhan marqaanews bad ka barorataa habenkiina maqsinkagad
Aan ooye albaabka ii xidha.kkkkkkk
Markaad aragto labada caasimadod ee hargeysa iyo muqdisho oo shidan
ayuu dhiigkar kugu dhacaa,kkkkkkkkk iska samir zxb intay tuuladaadu caasimad noqonayso,kkkkkkkkkkkkk
Ma anagaa suudanta keenay.
Ninyahow anigu cuqdad kama qabo Muqdisho & hargeisa ileyn labaduba waa caasimadi iyo caasimadi labaad ee SOMALI FEDERAL REPUBLIC. taasu waa taas.
Tan labaad anigu cuqdad kama qabo iidoor iyo qabiil kale oo somali ah.
Laakin waxaan diidanahay in aad aniga igu masaxdid filim isticmaarki ingriiska aha magac uu sameystay in aad isaga kay dhigtid in aad adigu wakiil ka tahay ninki cadaa ee magaca la baxay.
tan kale somaliya waxa jira dad loo yaqaano ”’SHISHEEYE KALKAAL ”’ oo sidaada oo kale ah, Adigo habaryoonista aad sheegatid madaafiic lala dhacaayo oo habarjeclo iyo habar awal ay ku heshiiyeen in ay dhulka dhigaan habaryoonis ayaad u sacabo tumaysa muuse biixi iyo ina kaahin.
Damiir laawe baad tahay ” DUF KU BAX ”
Cinwaanka kore kadaawo sida ay labada suldaan ee garxajis iyo suldaanka guud ee habar awal ay
Iskugu faraxsan yahiin,iyo sida hargeysa loogu soo dhaweyey suldaan maxamed xersi qani.kkkkkkkkkkkkk
Zxb dadkan goolaftankodu yaanu ku hodin,waxa kaliya eenu kashaqaynaa waa nabad.kkkkkkk
Adiguna aan ooyee albaabka ii xidha
I.C.G BAA YAABTAY